भोलि जापानबाट जम्मा एकजना नेपाली लिएर आउदै वाइडबडी जहाज, को हुन् ति भाग्यमानी ? - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > NRNA > भोलि जापानबाट जम्मा एकजना नेपाली लिएर आउदै वाइडबडी जहाज, को हुन् ति भाग्यमानी ?
May 11, 2020 February 8, 2021 GRISHI236
काठमाडौं, २९ वैशाख । जापानले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई भोलि मंगलबार ओशाका उडाउने भएको छ । जापानले नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक आरएको वाइडबडी जहाजबाट ती नागरिक स्वदेश लैजाने गरी Injectable Anavar for sale online in UK Anavar pills meat soup with macarrao एयरक्राफ्ट भाडामा लिइसकेको छ । उता जापानमा रहेका करिव ५० हजार नेपाली आफैं पैसा तिर्छौं, देशमा छिर्न देऊ भन्दैछन् । तर, स्वास्थ्य, परराष्ट्र हुँदै गृहसम्म यस्तो अनुरोध पुग्दा अस्वीकृत भएको छ ।
February 23, 2021 February 23, 2021 Raju Thapa